बाल्यकालमा यस्ता थिए सलमान खान, हेर्नुहोस यि अपत्यारिला तस्विरहरु – osnepal tv
बाल्यकालमा यस्ता थिए सलमान खान, हेर्नुहोस यि अपत्यारिला तस्विरहरु
एजेन्सी-फिल्म बी हो तो ऐसी’ बाट बलिउडमा डेब्यु गरेका चर्चित नायक हुन् सलमान खान । उनले फिल्म बी हो तो ऐसी’बाटनै फिल्मि क्ष्नेत्रमा पाइला टेकेका हुन् । उनको फिल्म बी हो तो ऐसी’सन् १९८९ मा रिलिज भएको थियो । तर फिल्मले राम्रो व्यापार गर्ने सकेन् पहिलो फिल्मनै फ्लप भएका कारण उनि निकै चिन्तित भएका थिए ।
उनिसंग रेखाले पनि अभिनय गरेकी थिइन । हरेक फिल्ममा सलमान फरक फरक अबतारमा देखा परेका हुन्छन् । उनले पहिलो फिल्मबाट नै धेरै फ्यान कमाएका हुन् । तर सलमानले पचास कटदा पनि विाह गरेका छैनन् । फ्यानहरुलाई उनको विहेको चासोको बिषय बनेको छ ।
सलमानले बेलाबेलामा आफ्ना तस्विर भिडियो हरु शेयर गरेर चर्चामा आउने गर्दछन् । उनि प्रेमका कारण पनि चर्चामा आउने गर्दछन् । हालै मात्र रिलिज भएको फिल्म भारतले बक्स अफिसमा रेर्कड राख्न सफल भएको छ । उनि अहिले मात्र नभई बाल्यकालमा पनि उतिकै सुन्दर र ट्यालेन्ट रहेका थिए । हेर्नुहोस बाल्यकालका तस्विर
Previous article लोक गायक बाबुराम खत्रीलाई कसरी लाग्यो एचआईभी ? के गर्दैछन् अहिले ? (हेर्नुहोस् भिडियो)
Next article भगवान् पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरुन, हेर्नुहोस आजको राशिफल
लोक गायक बाबुराम खत्रीलाई कसरी लाग्यो एचआईभी ? के गर्दैछन् अहिले ? (हेर्नुहोस् भिडियो)